Nikeza - iPrairie State Services Legal
Shayela ukuze unikele ngocingo:
Chofoza inkinobho ethi "NIKELA MANJE" ngezansi
Thumela iminikelo ku:
Umama obalekela ukuhlukunyezwa emndenini, umndeni obhekene nokuxoshwa, noma umakadebona alahlekelwe yinzuzo yakhe: ngokunikeza iPrairie State Legal Services, ubambisana nabameli bethu kanye nabasebenzi ukusebenzela omakhelwane bakho abaswele kakhulu. Ngezansi kunezindlela ezimbalwa ongasebenzisana ngazo nathi:
Ngokunikeza njalo ngenyanga, ukhombisa ukuzibophezela kwakho okuqhubekayo emsebenzini wethu wokuhlinzeka ngokulingana kwezobulungiswa. Uma ukhipha njalo ngenyanga, inani olikhethile lizodonswa ngokuzenzekelayo kwi-akhawunti yakho ngosuku oluthandayo.
Ukubambisana / ukuxhaswa minyaka yonke
Uma ibhizinisi lakho noma inkampani yezomthetho inentshisekelo yokuxhasa omunye wemicimbi yethu eminingi yasendaweni, thumela i-imeyili kuJennifer Luczkowiak, uMqondisi Wezentuthuko, ku [i-imeyili ivikelwe].
Isitoko / i-IRAS
Izipho zezokuphepha ukudluliswa kwesitoko, amabhondi nezinye izibambiso, ikakhulukazi lezo ezikhuphuke ngenani. Ngemiyalo yokwenza isipho samasheya ku-Prairie State, sicela uxhumane neHhovisi Lokulawulwa Kwesifunda sasePrairie ku (815) 965-2134.
Unganikela ku-Prairie State ngokuhlonipha noma ngokukhumbula umcimbi okhethekile noma umuntu.
IZINHLELO ZOKUFANISA ISIPHO
Uma umqashi wakho efanisa izipho, ungakwazi ukuphinda kabili noma uwuphindaphinde kathathu umnikelo wakho. Izinhlelo zesipho sokufanisa zivame ukufanisa yonke noma iphesenti leminikelo yabasebenzi ezinhlanganweni ezisiza umphakathi. Xhumana nabasebenzi bomqashi wakho ukuze ufunde ukuthi ngabe banikela ngohlelo lwesipho esifanayo.
Ukunikezwa kwamafa yisitatimende esilula esincwadini sakho sefa esinika iPrairie State noma yikuphi okulandelayo:
Amaphesenti acacisiwe wefa lakho,
Ucezu oluthile lwe-real estate (njengendlu yasemakhaya noma yezohwebo),
Impahla yomuntu eyigugu, njengomsebenzi wobuciko.
Uma unentshisekelo yokufunda kabanzi ngokunikela okuhleliwe, thumela i-imeyili kuJennifer Luczkowiak, uMqondisi Wezentuthuko, ku [i-imeyili ivikelwe].
Ungakwazi ukukhuthaza iPrairie State ngokusithanda ku-Facebook noma ngokusilandela ku-Instagram naku-Twitter. Uma wabelana ngokuthunyelwe kwethu, ukhuthaza inhloso yethu yokuhlinzeka ngokulingana kwezobulungiswa ngokwethula umndeni wakho nabangane ezinsizakalweni esizinikeza omakhelwane babo abaswele. Futhi ungasenzela isikhwama semithombo yezokuxhumana egameni lethu.
AMAKOMITI OKUJONGWA KWEZIMALI
Abantu abaningi banikela ngesikhathi sabo ePrairie State ngokusebenzela ikomidi lendawo lokuqoqa imali. Uma unentshisekelo yokufunda kabanzi ngokusebenza ekomidini lokuqoqa imali, thumela i-imeyili kuDaniel Nord, iMenenja Yezokuxhaswa Komphakathi, ku [i-imeyili ivikelwe].
Uma uthenga ku-Amazon Smile, i-Amazon izonikela ngengxenye ethile yokuthengile kwakho kwaPrairie State Legal Services. Ukuze ufunde kabanzi nokuthenga, vakashela I-Amazon Smile.
IPrairie State Legal Services, Inc. ixhaswe, ngokwengxenye, yiLegal Services Corporation (LSC). Njengombandela woxhaso oluthola ku-LSC, lukhawulelwe ekubandakanyeni kwezinye izinto kuwo wonke umsebenzi walo wezomthetho - kufaka phakathi umsebenzi osekelwa eminye imithombo yezimali. IPrairie State Legal Services, Inc. angeke ikwazi ukusebenzisa noma yiziphi izimali nganoma yimuphi umsebenzi onqatshelwe yi-Legal Services Corporation Act, 42 USC 2996, et. seq., noma ngomthetho womphakathi 104-134, §504 (a). Umthetho Womphakathi 104-134 §504 (d) udinga ukuthi isaziso sale mikhawulo sinikezwe bonke abaxhasi bezinhlelo ezixhaswe yi-Legal Services Corporation. Uyacelwa ukuthi uxhumane neHhovisi lethu Lokuphatha ku (815) 965-2134 ukuthola eminye imininingwane maqondana nale mikhawulo